အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅
Posted by kai on Oct 8, 2015 in Myanmar Gazette, News | 48 comments
ဒေါ်စုက သူသမ္မတ မဖြစ်လျင်လည်း သူ၏ပါတီကဖွဲ့သည့် အစိုးရကို ဦးဆောင်မည်ဟု အခိုင် အမာပြောသည်။ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီ တည်ကြည်သည်ဟု ပြောကြားသကဲ့သို့ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်ပင်းနှင့်လည်း နွေးထွေးမှုရှိသည်ဟု ဒေါ်စုကဆိုသည်။
အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော မိတ်ဆွေများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ ဖြစ်လာရန် ကူညီလိုသည်ဟုလည်း ဒေါ်စုက ပြောကြားသည်။ မြန်မာ အတိုက် အခံခေါင်းဆောင်နှင့် အဲန်အဲလ်ဒီ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စုက သူသည် သမ္မတ ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ သူ့ပါတီက ဖွဲ့စည်းသော မည်သည့် အစိုးရအဖွဲ့တွင် မဆို ဦးဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာစွာဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
သီတင်းပတ်များစွာ ငြိမ်သက်နေပြီး သုံးနှစ်နီးပါးကြာပြီးမှ အိန္ဒိယ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် အင်တာဗျူးတွင် ဒေါ်စုက ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲများကို နိုဝင်ဘာ ၈ တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်း သည် ဗြိတိသျှလူမျိုးဖြစ်နေသော ဒေါ်စုအား အခြေခံဥပဒေက သမ္မတဖြစ်ခွင့် မပေးပေ။ သို့သော်လည်း NLD ပါတီ မဲအများစုအနိုင်ရရှိကာ အာဏာရလာမည်ဟု ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် မျှော်လင့်ထားကြသည်။ ရန်ကုန် အင်ယားကန်ဘေးရှိ နေအိမ်တွင် အိန္ဒိယ ယနေ့ရုပ်သံ အစီအစဉ် To The Point သို့ ဒေါ်စုက ပြောကြားမှုများကို ဘာသာပြန် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
“ကျမ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားတာရှိပါတယ်။ NLD က ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လို့ အစိုးရ တစ်ရပ်ဖွဲ့ရင် အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်က ကျမဖြစ်မှာပါ။ ကျမသမ္မတ ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့”ဟု To The Point သို့ပြောခဲ့သည်။
ခင်ဗျား သမ္မတမဖြစ်ရင် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။
ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမလဲ။ နိုင်ငံကို ဦးဆောင်ဖို့ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ လိုလို့လား။
– See more at: http://mizzimaburmese.com/article/5736#sthash.RQRN7iqz.dpuf
Burma will soon be going to the polls in less than5weeks and it is widely consideredaseminal election. It could changeamilitarily controlled democracy intoagenuine one. Also, it hasahuge bearing on the future of Aung San Suu Kyi. Listen in.
‘Dangerous and complacent’ if racial and religious harmony taken for granted: PM Lee
Published Oct 4, 2015, 11:43 am SGT
‘Thoughts and Prayers Are Not Enough’: Obama on Oregon Shootings
Oct 1 2015, 8:01 pm ET by NBC News
our thoughts and prayers are not enough. It’s not enough. It does not capture the heartache and grief and anger that we should feel, and it does nothing to prevent this carnage from being inflicted some place else in America next week oracouple months from now.
အပစ်ရပ်စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ထိုးမည့်အဖွဲ့ကို လက်မှတ်မထိုးမီ သုံးရက်အလိုတွင် မတရားအသင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးမည်ဟုဆို
Tue, 2015-10-06 12:31 Location ရန်ကုန်
Issue No. No.878 Tuesday, October 6, 2015
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက် ခိုက်မှုရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးမည့် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား လက်မှတ်မထိုးမီ သုံးရက်အလို တွင် မတရားအသင်းအဖြစ်မှပယ် ဖျက်ကြောင်း ကြေညာမည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင် မင်းကပြောကြားသည်။
ပြောပြန်ရင်လည်း ဘက်လိုက်ရာ ကျ လွန်းပါတယ်။
ဒီလို ခေါင်းဆောင်မျိုးက ဘယ်နေရာက ဦးဆောင် ဦးဆောင်၊
တောက်ကျင့်ပုပ်ကြီး ကြိုးဆွဲရာကနေတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်တွေ ထက်တော့ လက်ခံနိုင်စရာကြီးပါပဲ။
မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ ကံ ကြမ္မာက ရုပ်သေး သမတ တွေ အောက် မှာ ဘဲ နေရတုန်း
နေရ ဦးမှာပါလား …. ကြားလို့တော့ မကောင်းဘူး… ကြားလို့ မကောင်းတာဘဲ
ပြောတာ နော် ..
ပြောရရင်.. US ကိုတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်နေတာကလည်း.. သမ္မတနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သာဆိုတယ်…
ကြိုးဆွဲတဲ့သူ ကောင်းဖို့ ပါပဲ ကိုကိုထူးဆန်းး
စလုံးမှာလည်း သမဒက ကြိုးဆွဲရုပ်ပါ။
ဒီ အမျိုးသမီးကြီး မျက်နှာကြောင့် ကျွန်မတို့ ရွှေပြည် ကို အရာသွင်းနေသူ တွေ ရှိနေခဲ့တယ် ဆိုတာ
ယုံတမ်းစကား မဟုတ်ပါ ကထူးဆန်း ရယ်။ :-)))
.ဟေ့ သူကြီး ဒီမှာကြည့်။
အမေရိကန် က အမေရိကန် က အင်္ဂလန် က အင်္ဂလန် တွေ အကြောင်း ဝေဖန်ထားတာ
Originally posted on Oct. 6, 2015, at 8:25 a.m. Updated on Oct. 6, 2015, at 9:55 a.m.
Alan White, BuzzFeed News Reporter, UK
Scott Waters isa66-year-old commercial artist and photographer from St Augustine, Florida.
The post has now been shared over 50,000 times. Here’s the full list of everything he observed.
Owner at Scott Waters – Artist
· 3,163 followers
· September 24 at 9:25pm · Edited ·
I was in England againafew weeks ago, mostly in small towns, but here’s some of what I noticed:
143,998 Likes · 188 Comments · 77,749 Shares
အမှတ်မမှားရင်…. UK က.. တိုင်းပြည်နာမယ်အမျိုးမျိုး.. ရှိသဗျ…
ကိုယ့်တိုင်းပြည်တောင်.. လူမျိုးတောင်.. ဘာသာစကားတောင်.. ဘာခေါ်ရမှန်းသေသေချာချာ မသိကြ(ရှာ)တဲ့.. ဗမာတွေသေချာသိမယ်… မထင်…။
သူ ရေး ထားတာ ဖတ်ကြည့်ပြီး အဲ့ဒီ ဘက် သွားနေချင်စိတ်တောင် ဖြစ်မိရဲ့။
အတော် နားအေးပါးအေး ရှိမယ်။
ခေါင်းထဲကို အဲ့စာကြောင်း အရင်ဆုံးဝင်တာပဲ
သူဂျီးတို့ မီဒီယာ သမား​တွေက မြန်​မာနိုင်​ငံ ရဲ့ သမတ ရာထူးကို စစ်​ဗိုလ်​​တွေ လက်​ထဲပဲ ထည့်​​ပေးချင်​​နေတာကိုး ……. ​ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်​တန်​ဘီ
၀င်းဒိုး တစ်ဆယ် အလကားပေးနေတာ ခဏဖယ်ထားလိုသူများအတွက်..။
Just right click near the time/date in the Taskbar system tray and pick Customize Notification icons. Then look for the GWX entry and change it to Hide icon and notifications. Update: Microsoft won’t take no for an answer and this notification reappears. You may have to disable it in Task Scheduler. Go to Library\_Microsoft\_Windows\_Setup\_gwx and disable gwxlaunchtryprocess and refreshgwxconfig.
David Pogue – September 4, 2015
In the meantime, here are some of the last bugs that stand between us and Windows perfection. (I’ve tested each of these on three computers and confirmed most of them with Microsoft. And I’m not including intermittent bugs — freezes, crashes, that kind of thing; this list includes only reliably unreliable features.)
Dragging items onto the Start button does nothing
If you drag an item onto the Start button, the tooltip says, “Pin to Start menu.” Great! Whataquick and easy way to installanew icon onto the Start menu!
Can’t enlarge the Start menu with your finger
The bug: The beauty of the new Start menu is that it serves both mouse/keyboard people and touchscreen people equally well. On the left, the traditional Start menu listing; on the right, Windows 8-style tiles.
ဒီမှာ တီဗီ ချန်နယ်ကနေ နှစ်စဉ်မုန့်ဖုတ်ပြိုင်ပွဲ လုပ်တယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ စီးရီး တစ်ခုပါ။
တစ်နေ့ Final ပြိုင်ပြီး ခေါင်းမြီးခြုံ မူစလင်မလေး တစ်ယောက် နိုင်သွားပါတယ်။
ဒီမှာ က တရားဥပဒေ ကောင်းကောင်းစိုးမိုးပြီး ဥပဒေ အထက် ဘယ်လို လူတန်းစား မှ မရှိတာ ကလည်း တစ်ကြောင်း၊
လူ ကို လူလို့ ဘဲမြင်တတ်တာ၊ အဆင့်မခွဲခြားတာ ကို ဂုဏ်ယူစရာလို့ လက်ခံထား တဲ့ လူများ လို့ တစ်ကြောင်း၊
မတရားမှု တစ်ခု မြင်ရင် မသိဟန်ဆောင်မနေဘဲ မတရားဖိခံ ရသူ ဘက်ကနေ ဝင်ပြီး ရပ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားရှိနေသူ အင်အားများတာက တစ်ကြောင်း မို့
ဒီ မူဆလင်မလေး နိုင်တာ ကို အပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့ သူမရှိ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဝိုင်းပြီး ချီးကျူး ခဲ့ ကြပါတယ်။
.ဒေးဗစ်ကင်မရွန် ကတောင် အဲဒီ မိန်းကလေး ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် စိတ်ဓာတ်ကို ကြိုက်တယ် ပြောလိုက်သေးရဲ့။
တနည်း အားဖြင့် ဒီနိုင်ငံ ဟာ ခိုင်မာတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘက်မလိုက်တဲ့ ဥပဒေ ရဲ့ အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက် ကြောင့် လူတန်းစားပေါင်းစုံ တစ်ပြေးညီ နေနိုင်တာ ကို ပြတာပါ။
. ကျွန်မတို့ ရွှေပြည် မှာတော့ ဥပဒေ အထက် က နေ နေရာ မဖယ်နိုင်တဲ့ လူ တစ်စု ရှိနေသမျှ ဒီလို စိတ်လုံခြုံပြီး နေရ တဲ့ ဘဝမျိုးတွေ ကို ဘယ်တော့ မှ ရမှာ မဟုတ်ပါ။
ဒါကိုမှ မမြင်နိုင်ဘဲ တစ်ခြား အပို တွေ မလိုသေးတာတွေ ကို ကျော်ပြီး လမ်းလွှဲ နေကြတာ ကို လိုက် နေကြဦးမယ် ဆိုရင်တော့ လဲ
စိတ်လုံခြုံ အေးချမ်းစွာ နေရတဲ့ ပြည်သူ တစ်ယောက် အရသာ ကို ကိုယ့် အတ္တကြီး မှု တစ်လွဲ ဆံပင်ကောင်း အရသာ နဲ့ .ပျော်သလိုသာ လဲပြီး နေကြပါတော့။
ဓမ္မစကူးလ်အမည်သုံး၍ ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု မပြုလုပ်ရန်တားမြစ်
ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာချိန်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကမဲဆွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းများ အားဗန်းပြ၍ မဲဆွယ်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်း အား တားမြစ်သည့် အသိပေးကြေညာချက်တစ် စောင်ကိုအောက်တို ဘာလ ၇ရက်တွင် ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်းက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ခေတ်မီဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေးစနစ်ဖြင့် မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေ သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာတရားတော် များကိုသာ သင်ကြား၊ သင်ယူရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း၊ သို့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ဓမ္မစကူးလ် ကျောင်း များရှိ ကလေးငယ်များကို ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ဆောင် ရွက်စေသည် တို့ကို မြင်တွေ့လာရ ခြင်းအပေါ် စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ ယင်းအတွက်ကြောင့် ဓမ္မစကူးလ်အမည်သုံးပြီး ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ မပြုရန် နှင့်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အမှတ် တံဆိပ်လိုဂိုနှင့် အလံတို့ကိုလည်း ယင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင် အသုံးမပြုရန် မေတ္တာ ရပ်ခံကြောင်းလည်း ပါ ၀င်သည်။…
““ကလေးတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းအရာကိုပဲ သင်ပေးချင်တယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေကိုပဲ လုပ်စေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာ ချိန်မှာအချို့ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီကလေးတွေကို သုံးလာတာ တွေ့ရတယ်။ ပါတီနိုင်ငံရေးတွေ မှာမပါဝင်စေချင်လို့ ဒီကြေညာချက်ထုတ်တာ””ဟု ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသာသန၀ရက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ မိန့်သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်မထုတ်ပြန်မီ အောက်တိုဘာလ ၅ရက်က ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ရဲကွင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပူးတွဲ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးဌေးဦး၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွင် ဓမ္မ စကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေး များအား ခေါ်ယူ အသုံးပြုမှုများ ရှိခဲ့ပြီးနောက်ထုတ် ပြန်ချက် ထွက်ပေါ် လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
““ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မနေ့တစ်နေ့က ပေါ်လာတာဆိုပေမယ့် ဆရာတော်တွေ က နိုင်ငံတကာကို သွားပြီး အပင်ပန်းခံ၊ ဒုက္ခခံပညာတွေ သင်ပြီး ထူထောင်ထားတာလေ။ ဒီလိုဓမ္မစကူးလ်တွေ အပေါ်မှာတော့ လက်ရှောင်သင့်တယ်။ မလုပ်သင့်တာ သေချာတာပေါ့။ အရင်တစ်ခါကလည်း သာသနာ့ နုဂ္ဂဟ အသင်းကို ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေတို့က ခုတုံးလုပ်သွားတာရှိတယ်လေ။ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ပါတီ အောင်နိုင် ရေး မလုပ်သင့်ဘူး”” ဟု ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ဆရာ တော်ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍ၀ံသ (ဦးပြည်ကျော်) က မ်ိန့်သည်။
၂၀၀၈ ခြေ/ဥ၊ ပုဒ်မ ၃၆၄ တွင် ဘာသာသာသနာကိုနိုင်ငံရေး အလို့ငှာအလွဲသုံးစားမပြုရန် တားမြစ်ထားပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကြောင့် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာ ပါကယင်းမှာ အခြေခံ ဥပဒေကိုဆန့် ကျင်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
“ကျမတို့အစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပါဝင် ပတ်သက်ဖို့ ကျမတို့ဖိတ်ခေါ်မှာပါ၊ ကြိုဆိုမှာပါ၊ ကျမအခုတည်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော ထားမယ်၊ ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်နဲ့ အခြားပြင်ပ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဒီနှစ်ယောက်တည်းက ပြင်ပပညာရှင်က နိုင်ငံကိုပိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆို ကျမတို့က ပြင်ပ ပညာရှင်ကိုပဲသုံးမှာပါ၊ ကိုယ့်လူကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ့်လူကိုဆုပေးတဲ့အလုပ်မျိုး ကျမတို့ ဘယ်တော့မှ လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး”
(၁၁/၁၀/၁၅ ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် ဖောင်ကြီး – ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဟောပြောပွဲ မှ)
NLD မှာ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ လူ မရှိဘူး လို့ စိတ်ပူနေကြတဲ့
ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွား၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ကိုကို၊ မမ၊ ညီ၊ ညီမ လေး များ
* ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟု ခေါ်ပါသည်။ * :-))
ဘယ်လို စကား ကို ဘယ်လို နေရာ ဘယ်လို လူ တွေ အတွက် ပြောရမယ် ဆိုတဲ့ ပညာ တွေ သူဆီက ရပြီးရင်း ရပါဘဲ။
ဒီလို လူမျိုး ကို တိုင်းပြည် အတွက် မသုံးနိုင်သေးတာ အတော်လေး နစ်နာတာ ကို မသိသူတွေ ရှိနေဆဲ။
ထိုင်းလူသတ်မှု မှာ မြန်မာ ကလေး နှစ်ယောက် သတ်တယ် ဆိုတာ ကို မယုံလို့ အမှန်တရား အတိုင်းဖြစ်ဖို့ အဲဒါကို Christopher Harkins နဲ့ က ဦးဆောင်ပြီး ယူကေ အစိုးရ ကနေ full independent investigation တာဝန်ယူဖို့ petition လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ တစ်သိန်းကျော် Supporter ရပြီး အဲဒီက နေ မနေ့ က ကျွန်မတို့ ကလေး နှစ်ယောက် အတွက် သတင်းကောင်း ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ သတ်တာ မဟုတ်တာ ထင်ရှားလို့ သေဒါဏ်က လွတ်ဖို့ရှိသွားတယ် ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ယူကေဖက်ကတော့ ထိုင်းအစိုးရကို တရားခံ အစစ် မိဖို့ အသစ်ဖိအား ပြန်စ ကြပါလိမ့်မယ်။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့လဲ မြန်မာ ကလေး နှစ်ယောက် လွတ်သွားတာ ကို ဝမ်းသာကြပုံ ရှိပါတယ်။
at least Win and Zaw will not be sentenced to death foracrime that is now clear to the entire world they had nothing to do with.
Let’s just stop all this B.S now. The boys are NOT guilty. The police ARE. They know exactly who did this and are obstructing justice at the highest possible levels.
Without your initial efforts and combined demands for justice and international intervention, Win and Zaw would have been hastily rushed through an even more ridiculous sham ofatrial and executed immediately.
This would have been met with immense praise by the insanely and criminally rich Koh Tao mafia families and police forces
celebrating both an extremely high pay day for an extremely horrible cover up.
BUT, this did not happen. Because of YOU, Win and Zaw are still alive and there is at least some hope of having the real killers brought to justice.
Remember please that together we haveavoice, alone we do not. Please do not fall into the typical corrupt Thai mafia state strategy of just waiting long periods of time for everyone to simply not care. Let’s remember David, Hannah, Win and Zaw until all receive justice! It is all of them and the prevention of future victims we fight for.
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဘူး ထင်ခဲ့တဲ့ petition sign တစ်ခု က မတရား အမှုဆင်ခံထားရတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ က အပြစ်မဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် ကို ကယ် နိုင်ခဲ့ ပြီ လို့ မှတ်တာပါဘဲ။
အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ရင် စာရှည်ကြီး ကို မျှထားပါတယ်။
မတရားမှူ ကို ဖယ်ပြီး တရားမျှတမှုကို လိုလားတဲ့ သူတွေ ရဲ့ တိုက်ပွဲ ဆက်ပါလိမ့်ဦးမယ်။
ထိုင်း က အဲဒီ မာဖီးယားမိသားစု နဲ့ လာဘ်စားတဲ့ ရဲ များ နဲ့ တိုက်ပွဲပေါ့။
ကျွန်မတို့ ရဲ့ မဲ တစ်ပြား ကလဲ မတရားမှု တွေကို ဖယ်ဖို့ အင်အားရှိတဲ့ လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီလက်နက်တွေ အားလုံး ညီရင် မတရားဖိနှိပ်မှုအောက်က ထွက်နိုင်မယ်လို့ အားလုံး ကို သိစေချင်ပါတယ်။
### ### ### ### ### ### ### ### ### ####
Almost at the finish line of round 1.
11 Oct 2015 — Hello everyone. So the trial is now at, or close to an official close and the judges will now take some time to contemplate and rule onaverdict. If they were paying any attention, then they will releaseastatement full of outrage and immense criticism of the prosecution that have no doubt been paid off to even take on this charade ofacase. Of course, if the judges were paying even the slightest bit of attention at all to the testimony and non-existent evidence that was not even presented nor given to them by the prosecution, then we can all breatheacollective sigh of relief with the assurance that while our fight to find and punish the real murderers of poor David and Hannah will be just beginning, at least Win and Zaw will not be sentenced to death foracrime that is now clear to the entire world they had nothing to do with.
But of course this is Thailand, where drugged up BMW driving rich grandsons of oligarchs are free to run over and drag the dead flailing corpses of even the mafia connected Thai police officers home under their bumpers with absolute impunity. This example is just one of many that signals that despiteaperfect defense and absolutely ZERO evidence implicating any guilt whatsoever of the falsely accused, the decision of their lives and deaths are in the hands of people that simply take their orders from their other corrupt higher up overlords.
As such, there are no guarantees that the judges will rule fairly, reasonably, or even sanely.
It is my belief that like the current corrupt hierarchy of the mafia state that is the police force, corrupt almost laughable, if it did not harm so many people, justice system and military ruled government, this judge will simply follow orders on how to rule. So that makes it OUR job to pressure the decision makers to order the judges to rule fairly.
It is important to note here, and please realize this has been explained to me by people whom devote their entire lives to activism, that just because you do not getadirect response from your protests or letters to government, it does not mean they do not hear you calling out their B.S.
These are evil and selfish people we are dealing with and the key word here should be selfish. Meaning if they feel their personal reputations are in danger they will throw their little corrupt underlings/minions under the bus to protect themselves. This is how we win! This is how we can receive at least some form of justice for the brutal deaths of poor David and Hannah.
If you areacitizen of the UK PLEASE PLEASE for the love of god PLEASE! Write to your members of parliament. Demand action and pressure be put on the Thai government itself to reopen the investigation. They really do hear you and I have personally seen reply mails from MP’s acknowledging such letters.
I have never lied in any of our updates and I won’t start now. They DO hear you if you write to them. So please write.
It is clear from our past campaigns that they are hearing us. We have achieved great victories in the sense of getting this previously little know story out on the international stage of media. Let’s finish our job and put our full effort into it. I promise you if you take the 5-10 minutes to write or email to your MP, it will not be in vain.
Without your initial efforts and combined demands for justice and international intervention, Win and Zaw would have been hastily rushed through an even more ridiculous sham ofatrial and executed immediately. This would have been met with immense praise by the insanely and criminally rich Koh Tao mafia families and police forces celebrating both an extremely high pay day for an extremely horrible cover up.
If you are in Thailand write to anyone that you think will hear you. The Prime Minister’s office, the DSI, your own members of the junta appointed parliament, and even Prayuth himself. This isagreat opportunity for him to back up his promises of cleaning up corruption in Thailand. Ask if he still believes that the investigation was perfect. Ask him if he is at the very least mandating all of his police forces to TIVO episodes of CSI Miami and Monk.
If you are from Myanmar, write to your government to demand they take more action in pressuring the Thai government to arrest those truly responsible.
If you are an American or from any other country on the planet, write to your state departments and have them pressure or at least warn potential visitors from visiting this island of death formally known as Koh Tao. While many are againstaboycott of this island, my logic is that you should not spend money inaplace that will murder you with impunity and then use your own money to bribe the police to murder other innocent migrant workers for crimes they did not commit.
I could writealong and lengthy list on the step by step ridiculousness of the prosecution’s “case” against the boys, but to be honest at this point it’s justawaste of time. If any of you have even slightly been following the case, then you are surely aware that there really is no case. If you do not get it by now, you never will.
It is also important to note that it is stupid to even need to provide evidence in the first place that Win and Zaw are NOT guilty. Why not instead prove that some of the main suspects mentioned before such as Nomsod and pals are not guilty. Remember that big ol PR stunt with the dressed up police captain threatening to imprison anyone that dares to suggest that Nomsod was guilty and doingapublic DNA swab to prove his innocence that was reported to beanegative match breaking world record times forareturn on DNA forensics testing? Yea well it simply DID NOT HAPPEN! Even though he was in front of the world on camera, the freaking test was not done or received by the testing officials.
This has been publicly reported and is not speculation. I am not saying he is guilty as I honestly do not know, but he is sure as hellalot more ofasuspect than these two Burmese migrant workers whom HAVE NO FREAKING DNA ON THE MURDER WEAPON.
I hate to say this but I actually agree with General Prayuth. Maybe these corrupt animals should have watched the hit T.V show Blue Bloods. Then they would learn that testing the FREAKING MURDER WEAPON for DNA evidence might lead toaclue or two.
Let’s just stop all this B.S now. The boys are NOT guilty. The police ARE. They know exactly who did this and are obstructing justice at the highest possible levels. Andy Hall is an example of how social media outrage can pressure Thai judges to rule fairly. His petition and supporters have been consistently vocal about the ridiculousness of the slander charges against him and now he has been cleared of such charges. We need to copy this model. Make your voice heard and continue to makeadifference.
This can only be done by social media outrage posts demanding the boys be freed now and the real killers brought to justice, as well as demanding that the case be reopened and perhaps the DSI involved. I personally would love to pressure General Prayuth himself and the heads of the police force to acknowledge that not only was the investigation not carried out “perfectly” but it was not even carried out at all. In Thailand, cover up and investigation are often synonymous and the people of Thailand and its guests deserve first and foremost protection and when that fails we demand that the families of the victims
Thailand not only failed to protect but murdered in the first place receive justice!
This week, I have been informed, by people working with the defense team that know far more than me about both the case and effective strategies to win justice, that as of now the best course of action we can take is to pressure the UK government themselves to get more involved. PLEASE if you areaUK citizen write to your members of parliament demanding more action.
Remind them that we never received an official reply to our petition of over 105,000 people that was hand delivered to the Prime Minister’s office. Tell them that evenafamous Thai forensics expert has verified beyond any reasonable doubt that the boys DNA WAS NOT! On the murder weapons but that other DNA was.
We want to know WHOSE DNA it was, although most already haveastrong hint *cough cough Nomsod! Tell them that the UK “investigators” they sent to Koh Tao did not investigateagod damn thing and simply regurgitated the lies spouted out by one of the most notoriously corrupt police forces on the planet, thereby giving the Thai police’s accounting of the events some legitimacy in the eyes of countless people that simply are not aware of how corrupt the Thai system of justice is.
This is comparable toaUN official going to North Korea, not being given access to anything or anywhere, then reporting back that “well from what I seen everything seems to conform to international standards of human rights”
I am really truly sorry to bother you all with these updates but there is one single fact that none of us can avoid. Together our voices are heard. Individually they are ignored. PLEASE! Share our demands for justice. It is not an exaggeration to state that without every single one of you signing sharing and voicing your opinions about this petition and case the boys would have long ago been executed and the rapists and murderers of Koh Tao would be freely able to rape, murder and torture, while posting jack ass pictures of themselves on Facebook making fun of the horrific murders at the AC bar mocking all of us that are seeking real justice. NO MORE! Lets put these animals in prison. Only you can do it and only we can achieve it.
Sorry for the long post. We are almost at the end of the trial, then the real lobbying and fighting for justice begins. Let’s keep fighting until those horrific corrupt criminally rich and murderous animals are behind bars for good.
Also, here are two articles that are worth reading. One is related to our case and how the FCO, and the UK government have essentially betrayed their own citizens and all of us demanding their involvement.
The other link is about another case from Jack Bartell who is actually being charged with assault after being beaten to near death by rich connected people atabar in Koh Samui. He was severely beaten and stomped on even whilst unconscious. I believe it is the same prosecutor as the Koh Tao case that is trying to send HIM to jail after uncountable numbers of surgeries.
Basically It’s all the same problem and if we want change we got to fight them all.
NCA လက်မှတ်ထိုးမယ့် အဖွဲ့တွေ အကြမ်းဖက် စာရင်းက ပယ်ဖျက်
“ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ အမိန့်ကြေညာစာ ဒီနေ့ပဲထုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS အဲဒါသုံးခုကိုတော့ ကျနော်တို့ မတရားအသင်းအဖြစ်ကနေ ပယ်ဖျက်ပါတယ် ၊ နောက်ထပ်နှစ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ အကြမ်းဖက်သူများအဖြစ်နဲ့ ကြေညာထားတဲ့ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်၊ အဲဒါက ABSDF နဲ့ RCSS နှစ်ခုကိုလည်း နောက်ထပ်ကြေညာချက်တစ်ခုကနေ အကြမ်းဖက်သူများစာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်ပါတယ်၊ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက နဂိုကတည်းက မတရားအသင်းအနေ နဲ့ ကြေညာထားတာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သီးခြားထုတ်ပြန်ပြီး ပယ်ဖျက်ထားတာမရှိပါဘူး”
(သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်)
ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းလိုဟု ပါတီများကို ဦးတင်အေး ခေါ်ပြော
မဇ္ဈိမ ရွေးကောက်ပွဲ အထူးကဏ္ဍ အနယ်နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းများ – မင်းမင်း
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၀ ခု နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် တွေ့ဆုံရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြောဆိုသည်ဟု တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်သူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးဝင်းထိန်က သတင်းထောက်များကိုပြောသည်။
ဦးတင်အေး၏ အဆိုပြုမှုကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့က ကန့်ကွက်ခဲ့သည်ဟု ဦးဝင်းထိန်က ပြောသည်။ ကန့်ကွက်သူများတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်ထိန်က ကန့်ကွက် ခဲ့သည်ဆိုသည်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကမူ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သဘောထား အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်ဟုဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းလိုခြင်း၏အကြောင်းပြချက်အဖြစ် ရေကြီးမှု၊ ကယားပြည်နယ်အတွင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် မြေပြိုမှုများကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုကြောင်း အကြောင်းပြသည်ဟုလည်း ဦးဝင်းထိန်က ဆိုသည်။
ဦးတင်အေး ဆိုလိုသည့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုမှုသည် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြစ်သည်ဟု ဦးဝင်းထိန်ကဆိုသည်။ ရွှေ့ဆိုင်းမည့် အချိန်ကာလကိုလည်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်း မရှိဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၊ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
လုပ်ငန်း ညိနှိုင်းအစည်းအဝေးဟု ဆိုသော်လည်း အဓိက အားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းလိုကြောင်းသာ အဓိက ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးဝင်းထိန်က ဆိုသည်။ ယခု ခေါ်ယူတွေ့ဆုံသည့် ပါတီများသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်များပြားမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပါတီများသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စေ့စပ် ညိနှိုင်းရေး ဗဟိုကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့် ပါတီများလည်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဆွေးနွေးသည့် ခေါင်းစဉ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ စေ့စပ်ညိနှိုင်းရေး ဗဟိုကော်မတီ လုပ်ငန်းညိနှိုင်းအစည်းအဝေးဖြစ်ပြီး ၂/ ၂၀၁၅ ဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေးကို နေ့လည်ပိုင်းတွင် ခေတ္တရပ်နားထားပြီး ညနေပိုင်းတွင် ဆက်လက် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
အဆိပ် ဖြစ်စေတဲ့အစာ ၊အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့စာအုပ်
အစာက လူကို အဟာရဖြစ်စေပေမဲ့ တချို့ အစာတွေကတော့လူကို အဆိပ်ဖြစ်စေတယ်။
ဒီလိုပဲ စာအုပ်ဟာ လူကို ပညာ ဗဟုသုတ ရစေပေမဲ့ တချုို့ စာအုပ်တွေကတော့
ဗုဒ္ဒ မြတ်စွာ ဘုရား ပရိနိဗ္မာန် ပြု ခံနီးမှာ စုန္ဒ ( ရွှေပုတိမ်သည် ) က မြတ်စွာဘုရားကို
၀က်သား ဟင်း ကပ်တယ်။ သူက ဘုရားကို ကြည်ညိုလွန်းတော့ ၀က်သားကို အထူးစီမံ ပြီးချက်ကပ်တယ်။ မြတ်စွာ ဘုရားက ဘုဉ်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီအစား ကို တခြားရဟန်းတွေကို ပေးမစားတော့ပဲ မြေမှာ မြုပ်စေတယ်ဆိုတယ်။
ဘာဖြစ်လုို့ လဲ ဆိုတော့ အဟာရတွေအများကြီးပါတယ်။ သာမန် ရဟန်းသံဃာတွေ ဘုဉ်းပေးမိရင် အစာ မကြေဖြစ်မယ်။ ဘေဥပါဒ် ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်တော်မူလို့ ဖြစ်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ရှင်လုို့မှ ဒီအစားကို ကြေညက်စေတယ်။ ခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင် တချုို့သွေးတိုးဆီချိုရှိ တဲ့သူတွေ အုန်းနိုခေါက်ဆွဲတို့ဒန် ပေါက်တို့ စားပြီး သွေးတက်ပြီး ဆေးရုံရောက်ကြ ၊ ဦးဏှောက်သွေးကြော ပြတ် ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်မယ်။
ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက စုံန္ဒကပ်တဲ့ ဆွမ်းကို သူဘုဉ်းပေးအပြီးမှာ ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေ ဘေးဥပုဒ် မဖြစ် စေခြင်းအလို ငှာ မဟာဂရုဏာ နဲ့တားမြတ်ခဲ့ပုံရှိတယ်။
ဒီဇတ်တော်က အစာပင် ဖြစ်ပေသိ အဆိပ်ဖြစ်စေ နိင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထင်ရှားခဲ့တယ်။
စာတွေမှာလဲ အဆိပ်တွေရှိတယ်။ ဒီထဲမှာ နိကိုလပ်စ် မိုက်ခယ်ရာ ဘယ်လီ (Niccolo Machiavelli ) ရေးတဲ့ အိမ်ရှေ့ မင်းသား ( the prince )
စာအုပ်က ရှေ့ ဆုံးကနေပါတယ်။
မိုက်ခယ်ရာ ဘယ်လီ ရေးတဲ့မင်းသား စာအုပ်ကို မကြာခန ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ကို မြန်မာလုို အစအဆုံးပြန်ထားတာမတွေဘူး။ မူရင်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖတ်ဖြစ်တယ်။ စာအုပ်ကို ခင်ဗျား မဖတ်ဘူးပေမဲ့ ကိစ္စမရှိဘူး။
မြန်မာ ပြည်မှာလက်ရှိစစ်အုပ်စု လူထု အပေါ်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့အ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြည့်ရင် မိုက်ခယ်ရာဘဲလီ စာ အုပ်ကို ဖတ်နေရသလိုဖြစ်မယ်။ သူရဲ့သွင်သန်ချက်တွေ ဟာ တသွေမတိမ်းတူနေတာကိုတွေ့ ရလိမ့်မယ်။
ဟစ်တလာရေးတဲ့ မိန် ကင့် စာ အုပ်ကို ခင်ဗျား မဖတ်ဘူးလဲ ကိစမရှိဘူး။ မိုက်ခယ်ရာဗယ်လီဟာ ဟစ်တလာကို လွမ်းမိုးထားပြီး ပြီ။
စစ်ဗိုလ်တွေက မိုက်ခယ်ရာ ဗယ်လီ သင်ကြားချက်တွေကိုဖတ်ဖူးခြင်မှ ဖတ်ဖူးမယ်။ တချို့ ဆိုရင်
ကြားတောင်ကြားဘူးမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် မိုက်ခယ်ရာ ဘဲလီ ရဲ့ အယူဆတွေနဲ့ ဘာကြောင့်
တူနေတာလဲ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်နေတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။
တကယ်တော့ဒီအချက်က အံသြစရာတာ့မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိုက်ခယ်ရာဘယ်လီရဲ့အိမ်ရှေ့ မင်းသား စာအုပ်ကြီးတခုလုံးရဲ့ အဓိက အနစ်သာရက လူကောင်း ဖြစ်ဖုို့ မဟုတ်ဘူး။ လူဆိုး ဖြစ်အောင် ( no to be good ) ကို အဓိက တိုက်တွန်းထားလုို့ဖြစ်တယ်။
သူစကားအတိုင်း အတိအကျ ပြောရရင်တော့
” the prince who want to sustain power or control citizen , learn not to be good ”
ဖြစ်တယ်။အဓိပါယ်က ” တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်မဲ့ မင်းသားဟာ အာဏာကို တသက်လုံး ကိုင်ထားခြင်တယ်။ လူတွေကို ထိမ်းချုပ်ထားခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ လူဆိုးဖြစ်နည်းတွေကို လေ့လာပါ။” လို့ သူက တိုက်တွန်းထားလုို့ ပဲဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ မြန်မာ ပြည် မှာ ဘယ်သူတွေက အာဏာကို တသက်လုံး ကိုင်ထားခြင်ကြသလဲ။
လူတွေကို ထိမ်းချုပ်ထားခြင်ကြသလဲ ။ ဘယ်သူတွေက လူကောင်းဖြစ်အောင် မလေ့လာ ပဲ
လူဆိုးဖြစ် နည်းကို အမြတ်တနိုး လုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် အလွယ်တကူ သိနိင်ပါတယ်။
မိုက်ခယ်ရာ ဗယ်လီ ရဲ့သြဇာဟာ ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ တချုို့နိင်ငံရေးသမား တွေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အပေါ်မှာ လွမ်မိုးထား တုံးဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်ကို ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့” နာခံမှုကိုစမ်းစစ် ခြင်း ” စာအုပ်မှာ ဆွေးနွေး ဘူးတယ်။
ဒါကြောင့် အဆိပ်ဖြစ်နေတဲ့အစာကိုမြတ်စွာဘု၇ားက ရဟန်းတွေကိုမစား စေပဲ မြေမြှပ်စေခဲ့တယ်။ အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ အစာ အုပ် တွေ ကိုလဲ သတိတမန် ညာဏ်မြေကတုတ် ထားပြီး
ဖတ်ရှု့ သင့်တယ်။ ပရိုတင်း ပြည့်တဲ့အစာတွေကို စားဖို့ ခင်ဗျား မှာ အစာချေ နှုန်း မြင့်ဖုို့ လိုအပ်
သလို အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ စာ အုပ်တချို့ ကိုဖတ်ဖို့ ခင်ဗျား မှာ အထူးလုိုအပ်တာကတော့ နှလုံးသား
ကောင်းဖို့ ပါပဲ ။ နှလုံးသားလှဖုို့ ပါပဲ။
ဒီစာအုပ်ကို အနောက်တိုင်းတွေမှာ ကျောင်းသားပြဌာန်းကြတယ်။ ဘာဖြစ်လုို့ အနောက်နိင်ငံသားတွေမှာ စိုးဝါးလှတဲ့အဏာရှင်တွေထပ်မပေါ်ပေါက်ကြတော့သလဲ။ အဖြေကတော့
သူတို့နှလုံးသား လှလှ နဲ့ ဖတ်ကြတယ်။ အသိတရားနဲ့ ဆင်ခြင်နိင်ကြလုို့ ပဲါ။
ဒါကြောင့် အချို့ အစာတွေကို သတိထားပြီးစားပါ။ တချုို့ စာအုပ်တွေကို အသိတရားနဲ့ဖတ်ပါလို့ တိုက်တွန်းခြင်ပါတယ်။
မိုက်ခယ်ရာ ဗယ်လီ (1469 – 1527)ဟာ အီတလီနိင်ငံသား တဦးဖြစ်တယ်။ ၁၅ရာစု ကလူသားတဦးဖြစ်တယ်။ သူအတွေးအခေါ်ကတော့ မြန်မာ ပြည်မှာ ကနေ့ အ ထိ ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်တယ်။
မြန်မာ ပြည်မှာ မုိုက်ခယ်ရာ ဗယ်လီ စာပေတွေက ဟော ပြောချက်တွေ၊လုပ်ဆောင်ချက်တွေ
the prince စာအုပ်ကို.. ဘာသာပြန်ပေးဖို့.. ပြုံးမမကိုတောင်ပြောဖူးသေး…
အဲဒါနဲ့.. ကိုမိုးသီးစာကို.. အမှတ်တရတင်လိုက်တာပါ..။
‘‘USDP ရွေးကောက်ပွဲရှုံးမယ်ဆိုရင် USDP အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာက အတိုက်အခံအဖြစ်ရပ်တည်ပြီး နောက်ရွေးကောက်ပွဲအထိ စောင့်ဖို့ပဲ’’
အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၃၃)
အီဂေါဗလာဇီဗစ်သည် Center forDemocracy and Culture ၌ သု တေသနပညာရှင်ဖြစ်သကဲ့သို့ အိန္ဒိယအခြေစိုက် Educational Initiatives တွင် Transition to Democracy program၏ ကျောင်းအုပ်လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကြာခဏလာရောက်၍ နိုင်ငံ ရေးသမားများ အထူးသဖြင့် အတိုက်အခံလှုပ်ရှားသူများအား ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်ရေး စသည်တို့ကို ဟောပြောပို့ချလျက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ထိထိမိမိရှိသော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ထောက်ပြချက် ဆောင်းပါးများကို နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများနှင့် နိုင်ငံ ရေးအသိုက်အဝန်းမှ ဂရုပြုဖတ်ရှုကြလေ့ရှိသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူချက်နိုင်ငံသားအီဂေါဗလာဇီဗစ်ကို လတ်တလောနှင့် မကြာမီဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်များအနက် အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဟာဗျူဟာကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဒီအချိန်မှာ မဟာဗျူဟာက သိပ်ပီပြင်ပေါ်လွင်ပုံပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ အာဏာရအလွှာက အီလစ်တွေဟာ သူတို့အနေနဲ့ ဦးသိန်စိန်ရဲ့ရုပ် ပုံကို ‘‘ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတည် ဆောက်တဲ့သမ္မတ’’၊ ‘‘ငြိမ်းချမ်း ရေးဖော်ဆောင်တဲ့သမ္မတ’’အဖြစ် အောင်အောင်မြင်မြင် တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ ကနဦးတုန်းကတော့ တွက်ချက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို အောင်နိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်မှာပဲလို့ သူတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ USDP ရဲ့လုံးဝဥဿုံအရေးနိမ့်မှုဟာ သူတို့အတွက် မျက်စိကျယ်သွားအောင် လှုပ်နှိုးခံလိုက်ရတဲ့ သတိပေးခေါင်းလောင်းသံဖြစ်သွားတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရုံးအဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်မှာ ရှိကြတဲ့ မဟာဗျူ ဟာမြောက် တွေးခေါ်မြော်မြင်အကွက်ဆင်တတ်သူတွေနဲ့ ဝါဒဖြန့် ချိရေးသမားတွေဟာ သူတို့အနေနဲ့ USDP ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ဒီထက်တစ်စုံတစ်ခု ထပ်လိုအပ်ပြီဆိုတာ နားလည်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါဟာ အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ ဘာသာရေးသဘောထား တင်းမာတဲ့အစွန်းရောက်ဝါဒတွေကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေတဲ့ အချိန်ပါပဲ။
အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အုပ်ချုပ် မှုတွေကနေ လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဆီ အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရ ဒီနည်းဗျူဟာကို ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်။ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒဟာ အာဏာရှင်ခေတ် နှောင်းပိုင်းကာလ အာဏာရ အီလစ်အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မနိုင်နိုင်တော့ဘူးလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အီလစ်တွေက သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားမှာ ပဋိပက္ခတချို့ကို လောင်စာဖြည့် မီးလောင်ရာ လေပင့်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ထုံးစံအရတော့ ဘယ်သူကမှ မနှစ်သက်တဲ့ လူနည်းစုတွေနဲ့ပေါ့။ နောက်ပြီး လူထုကြားမှာ အကြောက်တရားနဲ့ ဒေါသတရားကို လှုံ့ဆော်သွေးထိုး တော့တာပဲ။ ဒီကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ ဒေါသက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျံ့နှံ့လာပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အာဏာရှင်ခေတ်အလွန် သမ္မတနဲ့အာဏာရပါတီဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နိုင်ငံတော်နဲ့ဘာသာတရားကို ကာကွယ်သူများအဖြစ် အထင်ကြီးအောင် ပြသနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ထဲ အလွတ်ရနေဖို့ အရေးကြီးတာက အစိုးရအဖွဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့က အရေးမကြီးဘူးဆိုတာပါ။ သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာက အနိုင်ရရေးပန်တိုင်အပေါ်မှာ မတည်ဆောက်ထားဘူး။ သူတို့မနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ အရေးကြီးတာက နောက်သမ္မတကို ဘယ်သူက ရွေးမလဲဆိုတာပါ။ NLD နဲ့ NLD ကို မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ရွေးမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေက အဆိုပြုလိုက်တဲ့သူကိုပဲ သမ္မတအဖြစ် USDP ရယ်၊ တခြား ပါတီတချို့ရယ်၊ ကိုယ်ပွားပါတီတွေရယ်၊ သိမ်းသွင်းခံပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရယ်နဲ့အတူ တပ်မတော်က ရွေးနိုင်မှာလား။ NLD အဆိုပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့ စစ်တပ်အဆိုပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းထဲကနေ တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံး မဲဆန္ဒပေးကြရာမှာ အင်အားစုအုပ်စုတစ်စုမှာ လွှတ်တော်အမတ် ၃၀၀ နဲ့ ၃၂၀ ကြား အင်အားတစ်ခုခုလိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီပန်းတိုင်ကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် အစိုးရနဲ့ USDP ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟာဗျူဟာက ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်လာတယ်။ မဟာဗျူဟာမြောက် ပစ်မှတ်သုံးခုကို ကျွန်တော်မြင်တယ်။ တစ်ခုက အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်မှာ ရွေးကောက်ခံအမတ် ၂၅၀ နဲ့ ၂၇၀ လောက်ပဲ NLD အနေနဲ့ရအောင် ဆွဲချဖို့။ အဓိကအားဖြင့် ဒီဟာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် NLD ကို ဂုဏ်သိက္ခာအားဖြင့် ထိခိုက်အောင် ပြောဆိုတဲ့မသန့်ရှင်းတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေ၊ NLD ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မဘသစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်ပြီး သူတို့ကြိုးစားကြတယ်။
ဒုတိယမဟာဗျူဟာက USDP အတွက် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးမှာ အမတ်နေရာအနည်းဆုံး ၁၀၀ ရဖို့ပဲ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ပါတယ်လို့ လူတွေယုံအောင်ပြော အမှတ်ယူတာရယ်၊ မဲဝယ်တာရယ်ဟာ ဒီပစ်မှတ်ကို ထိခဲ့ဖူးတဲ့ အဓိကနည်းဗျူဟာတွေဖြစ်ပါတယ်။ မဘသထောက်ခံအားပေးမှုကလည်း ဒီဗျူဟာကို ကူညီနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားတိုးတက်ရေး ပါတီတို့လိုမျိုး ကိုယ်ပွားပါတီတွေကနေလည်း လွှတ်တော်ထိုင်ခုံနေရာတချို့ကို ယူနိုင်တယ်။ ဒီလိုသာ ဖြစ်ရင် USDP နဲ့ ကိုယ်ပွားပါတီတွေရယ်၊ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၆ ဦးနဲ့ တပ်မတော်ရယ်က ပေါင်းပြီး နောက်သမ္မတအတွက် မဲပေးဖို့ ၂၆၆ နေရာရှိမယ်။ အဲဒါက မလုံလောက်သေးပေမယ့် NLD လောက် ထပ်တူနီးပါးဖြစ်သွားပြီ။
တတိယမဟာဗျူဟာ မြောက်ပစ်မှတ်က အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာကွဲနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါ တီတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရထားဖို့နဲ့ နောက်သမ္မတအတွက် USDP ရယ်၊ တပ်မတော်ရယ်နဲ့ အတူတူ မဲပေးမယ့် သိမ်းသွင်းခံပူးပေါင်းတိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အလုံအလောက်ရထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ NLD ထက်စာရင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တည်ဆောက်မှု အလားအလာတိုးတက်ရာမှာ ပိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံဖို့ လိုပါတယ်။
လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးမှာ နေရာ ၂၈၀ ကျော်ကိုရရှိရေး NLD က အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်၊ USDP နေရာ ၅၀ ဒါမှမဟုတ် ၆၀ လောက်ထိ ထိုးဆင်းသွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ အခါ ၁၆၆ ဦးသော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များဆိုတဲ့ အသာစီးရမှုကြီးကတောင်မှ USDP ကို ကယ်တင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ မြန်မာ့အနာဂတ်ကိုကော ဘယ်လိုမြင်ပါ သလဲ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးက အင်မတန်ခက်ခဲနက်နဲရှုပ်ထွေးသလို နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း မြန်မာဟာ ပိုလို့တောင်နက်နဲရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခန့်မှန်းဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်မှန်းအနာဂတ် ဖြစ်နိုင်ခြေဇာတ်ညွှန်းလေးခုကို ကျွန်တော်ပုံကြမ်းကောက်ကြောင်း ဆွဲပြရဲတယ်။
ဇာတ်ညွှန်း(၁)။။ NLD ရွေး ကောက်ပွဲနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်၊ USDP နဲ့ တခြားသူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက နောက်သမ္မတသစ်ကို ရွေးချယ်လိမ့်မယ်။ အဲဒါက တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေက အဆိုပြုတင်မြှောက်တဲ့သူ။ အဲဒီလိုသာဖြစ်ရင် ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် ဘာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား တပ်မတော်ထဲက အထက်တန်းလွှာ လက်တစ်ဆုပ်စာလူတစ်စုအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ ရောထွေးနေသောစနစ်များ၊ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှုတို့ကို ထပ်ပေါင်းစည်းထားတဲ့ဟာကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်။ တပ်မတော်ထဲက အထက်တန်းလွှာ လက်တစ်ဆုပ်စာလူတစ်စု အုပ်ချုပ်မှုဆိုတာ စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ကို တိုက်ရိုက်မအုပ်ချုပ်ပေမယ့် ကြီးကြပ်သူနဲ့ အန္တိမအဆုံးအဖြတ်ပေးသူအဖြစ် နိုင်ငံရေးစနစ် အပြင်မှာ စစ်တပ်က နေရာယူထိုင်နေမယ့် အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့။ စနစ်များရောထွေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာက ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိပေမယ့် နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေက တော်တော်တရားမမျှတတဲ့အတွက် အာဏာရပါတီကသာလျှင် အမြဲတမ်းအနိုင်ရတဲ့စနစ်။ (အဲဒီလို အစိုးရအောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးရှိမှာဖြစ်ပေမယ့် ခရိုနီတွေနဲ့ မိသားစုတစ်သောင်းလောက်ကပဲ ဒီစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုမှာ အဓိက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တခြားသူတွေကတော့ အကျိုးသိပ်ရကြမှာ မဟုတ်ဘူး။) ဖက်ဒရယ်ဝါဒဆီ အပြောင်းအလဲလည်း ကျွန်တော်တို့ရကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ အသေချာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဂတိလိုက်ခြစားမှုမှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်လျှော့ချတာကို ကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားအာဏာရအလွှာ အီလစ်တ ချို့အနေနဲ့လည်း အကျိုးအမြတ်ရလိမ့်မယ်။
ဇာတ်ညွှန်း(၂)။။ NLD က အပြတ်အသတ်လွှမ်းခြုံအနိုင်ရပြီးအဲဒီအောင်မြင်မှုကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲရေးဖိအားပေးဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်၊ ဥပမာ-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတောင်းဆိုတဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့ ခြေလှမ်းတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အခြေအနေကို မတည် ငြိမ်အောင်လို့ စစ်တပ်က အမျိုးမျိုးသော လက်နက်အများကြီးကို အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ပြောပြရမှာတော့ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာသာရေးသဘောထား တင်းမာမှုဝါဒနဲ့ ဘာသာလူမျိုး အသိုက်အဝန်းကြား ဆူပူမှုကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်။ အခြေအနေကို အပြင်းအထန် မတည်ငြိမ်အောင်လို့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းပဲ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေက ပဋိပက္ခလည်း နောက်ထပ်ပိုပြင်းထန်လာစေနိုင်တယ်။ ‘‘ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ခြိမ်းခြောက်မှု’’ ဒါမှမဟုတ် ‘‘တ ရုတ်ခြိမ်းခြောက်မှု’’ဆိုတာတွေကို အလွယ်ကလေးအသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်တယ်။ NLD ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရင် စစ်တပ်က နောက်ထပ် အာဏာသိမ်းဦးမယ်လို့တော့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲဖို့ NLD က ဖိအားသိသိ သာသာတိုးခင်းကျင်းမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်တပ်က အခြေအနေကို မတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေကို ထောက်ပြီး ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်နဲ့ ရွေးကောက်ခံအစိုးရကို ဆိုင်းငံ့ဖို့အတွက် ယိုးမယ်ဖွဲ့အကြောင်းပြစရာအဖြစ် သုံးနိုင်တယ်။ ဒါကစစ်တပ်အပါအဝင် လူတိုင်းလူတိုင်း အရှုံးသမားဖြစ်ကုန်ကြမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းပါ။ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်ကို ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးထည့်မတွက်ဘဲ ချန်လှပ်ထားလို့လည်း မရပါဘူး။
ဇာတ်ညွှန်း(၃)။။ NLD ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲဖို့အတွက် တွန်းအားမပေးဘူး။ အဲဒီ အကျိုးအကြောင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ အခွင့်အလမ်းကြုံတိုင်း အစိုးရကို အားနည်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စစ်တပ်က အစိုးရသစ်ကို တက်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ မအောင်မမြင်ဖြစ်မယ့် အခွင့်အလမ်းကလည်း အတော်များများ ရှိလိမ့်မယ်။ အဓိကစိန်ခေါ်ချက်တချို့ကို ကျွန်တော်မြင်နေတယ်။ အစိုးရသစ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်စဖို့ လိုပြီး နိုင်ငံတော်အဆင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို စတင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာ ညပ်ပြီး အလွယ်တကူပဲ မအောင်မမြင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အစိုးရသစ်ဟာ ဘာသာရေးသဘောထားတင်းမာမှုဝါဒကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရာမှာလည်း ရှုံးနိမ့်နိုင်တယ်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်းလှိုင်းလုံးတွေ အသစ်တစ်ဖန်ရိုက်ခတ်တာကို ထိန်းသိမ်းရာမှာလည်း အရေးနိမ့်နိုင်တယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းစေချင်သူတွေ၊ အလုပ်အကိုင်သစ်တွေနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့လစာတွေ၊ လမ်းတွေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ၊ ရေ၊ မြေ ယာ၊ ပိုကောင်းတဲ့ပညာရေးနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေးတွေကို လိုချင်သူတွေ၊ နောက်ပြီး အဲဒါအားလုံးကို အခုချက်ချင်းကြီးလို ချင်သူတွေရဲ့ အဆင့်ဆင့်များပြား လှတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ အင်မ တန်ကြီးမားတဲ့ဖိအားအောက်ကိုလည်း အစိုးရဟာ ရောက်လာနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူမှုစီးပွားအခြေအနေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရမရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ်ရထားတဲ့ စစ်တပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ခံအစိုးရ မအောင်မြင်ဖြစ်ပြီး လူကြိုက်မများတော့မယ့်အချိန်ထိထိုင်စောင့်နေရုံပဲပေါ့။ ရွေးကောက်ခံဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရတွေဟာ ၂ နှစ်-သုံးနှစ်အုပ်ချုပ်ပြီးနောက်မှာ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့စိတ်မကျေနပ်မှု တွေကို ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ မျှော်လင့်ချက်တွေက အရမ်းကြီးမားပြီး အမှန်တကယ် လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာက နက်ရှိုင်းလှတဲ့အတားအဆီး အနှောင့်အယှက်တွေ အပြည့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ စစ်တပ်နဲ့ စစ်တပ်ဟောင်းပါတီတွေအနေနဲ့ စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုအတွက် မရှိရင်မဖြစ် လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားပဲဆိုတဲ့ စောဒကတက် ငြင်းခုံမှုတွေ ပြန်လုပ်နိုင်ပြီ လေ။
ဇာတ်ညွှန်း(၄)။။ NLD အ နိုင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရော၊ အရင်စစ်တပ်က ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရော နှစ်ခုစလုံးပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအစိုးရတစ်ရပ်ကို ဖန် တီးတယ်။ NLD ဟာ စစ်တပ်နဲ့ ရော တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ပါ ဟန်ချက်ညီတဲ့ အာဏာမျှဝေမှု သဘောတူညီချက်ကို သတိကြီး ကြီး ပြင်ဆင်ရေးသားရာမှာ အောင်မြင်ရင်တော့ NLD အနေနဲ့ အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ရှေ့ တန်းတင်ဖို့ ဉာဏ်အမြော်အမြင် လုံလုံလောက်လောက်ရှိတာပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲလွန် အကူးအ ပြောင်း ကတိကဝတ်သဘောတူ ညီချက်ကို အဓိကကျတဲ့ပါဝင်သူ တွေကြားမှာ ဖန်တီးတယ်။
နောက်ပြီး ဒါကနိုင်ငံရေးနှစ်ခြမ်းကွဲမှုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုဖြစ်မယ့်အလားအလာကို သိသိသာသာလျှော့ချစေတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ နိုင်ငံရေးရာသီဥတုအခင်းအကျင်းဟာ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ စီးပွားရေးကောင်းမွန်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်မှာ အများအားဖြင့် အာရုံစိုက်ဖို့အတွက် အချိန်နဲ့နေရာပေးလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးမူဝါဒသစ်တွေဟာ အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေအပေါ် စေ့စေ့စပ်စပ် ဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်။ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ အစိုးရဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစနစ်ကို ပြောင်းတာနဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်တာဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို ပိုစိတ်အားထက်သန်ပြီးတောင် ဆက်လုပ်နိုင်မယ်။ ထပ်လောင်းပြောရရင် ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုတော့ အများကြီး ဦးစားပေးသင့်တယ်။ အစိုးရရဲ့တခြားအဓိကလုပ်ငန်းကတော့ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအရေအတွက် တိုးမြှင့်ရေးဖြစ်ပြီး သတိရှိရှိ တဖြည်းဖြည်း ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ် လျှော့ချခြင်းကို စတင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ အစိုးရလုပ်သင့်တဲ့အရာပါပဲ။
လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို လွှတ်တော်အသစ်မှာ တပ်မတော်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တချို့ကနေပြီး သမ္မတအဖြစ် ထပ်တင်မြှောက်ခန့်အပ်လာကြမယ်ဆိုရင် အဲဒါ မြန်မာနိုင်ငံရယ်၊ ပြည်သူလူထုရယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရယ်နဲ့ အတိုက်အခံအတွက် ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါလဲ။
USDP ရွေးကောက်ပွဲရှုံးမယ်ဆိုရင် USDP အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာက အတိုက်အခံအဖြစ် ရပ်တည်ပြီးနောက် ရွေးကောက်ပွဲအထိ စောင့်ဖို့ပဲ။ ဦးသိန်းစိန်အနေ နဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာက အငြိမ်းစားယူလိုက်ပြီး သူစတင်ခဲ့ တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် သူ့ကိုချီးမွမ်းကြမယ့် သမိုင်းဝင်ဘဝမှာနေဖို့ပါပဲ။USDP ရွေးကောက်ပွဲရှုံးပြီးနောက်မှာ ဦးသိန်းစိန်ကိုပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အဆိုပြုချက်အရ ပြန်တင်မြှောက်ကြမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် ဦးသိန်းစိန်ကို သမိုင်းမှာ အမှတ်ရနေကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လေးစားဖို့၊ ရှုံးနိမ့်သူနောက်မှာရပ်ပြီး သူ့ရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အဆုံးအဖြတ်မဲအားကိုးနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အနိုင်ရပြီးသားသူကို ပရိယာယ်နဲ့အနိုင်ယူရေး မကြိုးစားဖို့ဆိုတာဟာ မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတပ်မတော်ဟာ
ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသူတွေကို ထောက်ခံသင့်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရသူက အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးအစိုးရကို ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ ဒီအစိုးရဟာ အားလုံးပါဝင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်သင့်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်အာဏာ ရှိပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုစိတ်ရှိကြတဲ့ တပ်မတော်အဆင့်မြင့်အရာရှိဟောင်းကြီး တချို့လည်းပဲ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေ အားလုံးအတွက် သူလည်းနိုင်၊ ကိုယ်လည်းနိုင်ဇာတ်ညွှန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒါဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် လူထုအများစုရဲ့ဒီမိုကရက်တစ် ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး တပ်မတော်နဲ့ USDP ကနောက်သမ္မတကိုရွေး ချယ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးအပေါ် စစ်တပ်သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုကိုဆက်ကာကွယ်မယ်။ စီးပွားရေးအပေါ် ခရိုနီလွှမ်းမိုးမှုကို ဆက်ကာကွယ်မယ်။ တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအပေါ် ဗမာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆက်ကာကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆက်ဖြစ်ရေးအတွက် လက်ခံရရှိကြောင်း သင်္ကေတမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့နဲ့ စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အ ထောက်အပံ့ဖြစ်လောက်တဲ့စမှတ် မဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်ပူမိတဲ့အခြားအရာတွေကော ရှိသေးလား။ ရှိရင် အဲဒါကဘာတွေဖြစ်ပါသလဲ။
မြန်မာဟာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကွဲလွဲနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အကြီးဆုံးအဟန့်အတားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ရော၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ်မှာပါ နှစ်ခုစလုံးရဲ့အဓိက ဇာစ်မြစ်က အမျိုးမျိုးသောတိုင်း ရင်းသားအဖွဲ့တွေကြား နိုင်ငံတော် ဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေးသဘောမတူညီမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပါဝင်သူတွေရဲ့ထင်ရှားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကြားမှာ နိုင်ငံတော်လက္ခဏာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း သဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့ တော့ အခုအောက်မှာပြောပြမယ့် သုံးခုကို မရနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို မအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးကနေ တပ်မတော်တဖြည်းဖြည်း ထွက်သွားပြီး အရပ်သားဆီအုပ် ချုပ်မှုဆီ အကူးအပြောင်းကို မရရှိ နိုင်ပါဘူး။
နိုင်ငံတော်အဆင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မှာ လူအများအပြားက မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားထားကြတယ်။ ကျွန်တော့်အထင်မှာတော့ နိုင်ငံတော်အဆင့်နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုလောက်တဲ့အခြေအနေတွေ ဖန် တီးပေးမယ့် တခြားလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ နှစ်ရပ်စလုံးက ရွေးကောက်ခံအရပ်သားနိုင်ငံရေးပါ တီတွေဟာ အချင်းချင်းကြားမှာ အပြန်အလှန် နားလည်မှုနဲ့ သဘောတူညီမှုလုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအစိုးရဟာ အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နဲ့ပတ်သက်လို့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ သဘောတူညီချက် မရှိခင်ကတည်းကကိုက အားလုံးပါဝင်တဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး စတင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အဆင့် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် မူဘောင်မှာအရာအားလုံးကို ဆွေးနွေးပြီး သဘောတူကြတဲ့အထိ စောင့်မနေဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိ မယုံကြည်မှုနဲ့ ကွဲပြားမှု ရေချိန်နဲ့ဆိုရင် သဘောတူညီချက် တစ်ခုခုကို ရဖို့ဆိုတာ အလွန်ခက်ခဲမှာမို့လို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အရင်လုပ်ရမယ့်ဟာကို အရင်လုပ်။ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အဆင့်ဆင့်မှာ ပါဝင်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ‘အားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရ’ကို အခု ကတည်းက ဖန်တီးပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အနှောင့်အနှေး မရှိဘဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးပေးပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ့်အချိန်မတိုင်ခင်မှာတင်ပဲ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို တတ်နိုင်သလောက် များများစတင်ပါ။
USDP ကို အတိုက်အခံကောင်းအဖြစ်တောင် မမြင်မိပါဘူးးး
လူဘောင်သစ် က ပိုပြီး ပါးနပ်တဲ့သူများသလိုပဲ။
တကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြန်စုနိုင်ရင် USDP ထက် အပုံကြီး သာတဲ့ အတိုက်အခံဖြစ်အူးမှာ။
USDP က တပ်ထွက် လူပျင်းတွေ များတယ်ရယ်။
တပ်နဲ့ USDP ချိပ်နေတယ်လို့.. လူတွေထင်နေတာကို ဖြိုဖျက်ရလိမ့်မယ်..။
ဒီလိုအထင်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကိုက… USDP ရဲ့မဟာဗျူဟာလို့..ထင်…။
ပြည်တွင်း ကျပ်ငွေသုံးစွဲမှု တွင်ကျယ်လာရန် နိုင်ငံခြားငွေ လိုင်စင်များကိုသာ ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အထိ ကိုင်ဆောင်ခွင့်နှင့် ၀န်ထမ်း လစာ ပေးချေမှုများမှာ ယခုနိုင်ငံခြားငွေ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်
Published on Mon, 10/19/2015 – 20:44
ပြည်တွင်း ကျပ်ငွေ သုံးစွဲမှု တွင်ကျယ် လာစေရန် ယခင် ချထား ပေးခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားငွေ လိုင်စင်များကိုသာ ရုပ်သိမ်းခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အထိ ကိုင်ဆောင်ခွင့်နှင့် ၀န်ထမ်းလစာ ပေးချေမှုများမှာ ယခု နိုင်ငံခြားငွေ လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးဝင်းသော်က The Daily Eleven သို့ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
Clinton testifies before House committee on Benghazi
By Washington Post October 22 at 10:04 PM
. မြန်မာပြည်ဟာ.. အမေရိကားအတွက်…တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ “စိတ်ဝင်စားမှု” နေရာမှာရှိနေကြောင်း…။
InaNew Paper report on 23 October, she was reported to have said: “One of my goals I set for myself should I win Miss World Singapore was to introduce my people to the world.”
When she was asked what she meant by “my people”, she reportedly explained that she was referring to the Kachin people of Burma, who reside in the northern part of the country.
“I believe that I am the first Kachin to take part in the Miss World Pageant,” she said.
There is nothing wrong with Ms Maru being proud of her ethnic roots, and indeed all of us are of ours. Nonetheless, perhaps she should make it clear that while she retains – and rightly so – her roots to her people, her home is now Singapore.
If Singaporeans want to complain about the fact that she is born in Myanmar and they feel like they know Singaporean women born and bred here who are exemplary, then I urge them to encourage these women to join next year’s Miss World Singapore.
– Miss World Singapore organiser Raymund Ooi
– See more at: http://www.tnp.sg/news/singapore-news/miss-world-singapore-2015-winner-facing-flak-myanmar-roots#sthash.N85lKKpl.dpuf
ဆရာစံဇာနည်ဗို က ရွေးကောက်ပွဲကာလ ၀န်းကျင် ဆူပူမှု အကြမ်းဖက်မှုတွေ အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ဟောထားတယ်။
ရွာသူတယောက်ရဲ့ မြို့ က ပုဏ်ဏားအိုကြီး တပါးကတော့ အဲလို ဖြစ်ရပ်တွေ ဧပြီလမှ စလိမ့်မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်ထားပါသတဲ့။
ဲပည်သူပြည်သားများ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေ
ဘယ်လို တွေ ဖြစ်လာမှာမို့ ဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ ရှောင်နိုင်မှာ ဆိုတာလေးတွေ ကြားပါရစေဦး။
ကရင်စည်သူဟောကိန်းထဲလည်း ပါးပါးလေး ပါခဲ့သေးတာမို့ ပါ။
ဒီဟော ပြောချက် မှား ခဲ့ပါက
ဗေဒင်ဟောခြင်းက အပြီးရပ်နား မည်
ရက်နီးလို ထပ် တင်ခြင်းပါ
ရွှေးကောက် မဲ့နေ့ ဟာ 8ရက်နေ့ ဖြစ် လို့ 8 ဂဏန်း စိုးမိုး နေ ပါတယ် ဂဏန်း ဟာ တားရော့ ပညာ အရ (STRENGTH)စွမ်းအား ရှင် ကဒ် ကျပါတယ် ဒီကဒ်မှာ သန်မာပြီး ဥာဏ် ပညာ ကြီးမား တဲ့ မိန်းခလေး တယောက် ဟာ ခြင်္သေ့ တယောက် ကို ထိန်း ချုပ် ထား ပါ တယ် ထို ကြောင့် မိန်းမ ပါတီ က အနိုင်ရ ပြီး ခြင်္သေ့ ပါတီ က ကျဆုံး ပါမယ် လို့ ပြော ချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ခြင်္သေ့ ကို ထိန်းချုပ် မပိုင်နိုင် ရင် မိန်းမကိုပါ ခြင်္သေ့ က ဝါး စား လိုက် ပါမယ်
ခြေင်္သေ့ ဟာ ဒေါသ အပြည့် နဲ့ မာန်ထောင်နေပါတယ်
သေချာတာ တော့ မိန်းမ ပါတီ အနိုင် ရ မှာပါ
ရွှေးကောက်မဲ လ ကို ကြည့် ပြန်တော့
11လပိုင်း ပါ တာရော့ ပညာ အရ 11ဂဏန်း ဟာ( JUSTICE)တရား စီရင် ရေး ကဒ် ဘာ ထိုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ တရားစီရင် ရေး ဟာ ပို မို ကောင်း မွန်လာ ပါမယ် အဲ အချိန် အရင်က အပြစ် ရှိ ခဲ့ သူတွေ ဟာ
ပြစ်ဒဏ် ကျခံ ရ ပြီ ရာထူး ပြုတ်မဲ့ သူ များ လဲ အများ အပြား တွေ့ရ ပါမယ် ပြိုင်ဘက် ပါတီ တွေ က ဥပဒေကို ကိုင် ပေါက် ပြီး မဲ ရ အောင် လုပ်ဆောင်ပါ မယ် (ခြင်္သေ့)ပါတီ
ဒါကို မိန်းမ ပါတီ က ဥပဒေ သဘော တရား နှင့် ပညာ ရေး အရ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်မှ အနိုင် ရ ပါမယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲ မှာ အမှန် တရား ဘက်က နတ်စောင့် မှာပါ အမှန်ကန် တဲ့ ပါတီ အနိုင် ရသွားမှာပါ
ခုနှစ် ကို ပြန် လေ့ လာ ကြည့် ပြန် တော့
2015 ဖြစ်နေတော့ ၈ဂဏန်း ပြန် ရ ပြန် ရော
ဒါကြောင့် တားရော့ ပညာအရ (STRENGTH)ပါ ထိုကြောင့် မိန်းမ ပါတီ အနိုင်ရ ဖို့ ပို ကြိမ်းသေ သွား ပါမယ်
ရက်လနှစ် အကုန် ပေါင်း လို့ ရ တဲ့ ရလဒ် အရ (8-11-2015)=8+2+8=18 ရ ပါတယ် 18ဂဏန်း အရ တားရော့ပညာ မှာ The moon ဆိုတဲ့ လမင်း ကဒ် ကျ ပါတယ်
ထို ကဒ်မှာ လမင်း ကို ကြည့် ပြီး ခွေး ဟောင် နေ ပါတယ် လမင်း မှ မျက်ရည် များ ကျဆင်း နေပါတယ် ဒါကို ကြည့် ခြင်း ဖြစ် အနိုင်ရ ပါတီ ကို အင်းအာ လူ အား စု ပြီး အမျိုး မျိုး ပြသနာ များ မဖြစ်ဖြစ် အောင် ဖန်တီး ပါမယ် ထိုကြောင့် အနိုင်ရ ပါတီ မှာ မျက်ရည် များ ပြသနာ ဖြေ ရှင်း မူ များ စွာ နဲ့ သမ္မတ သက်တမ်း ၅နှစ် ကို ကျော်ဖြတ် ရပါမယ် နိုင်ငံ ရေး စစ် ရေး နဲ့ ဆူပူ မူ များ ဖြစ် လာ အုန်း မှာ ပါ ဒါကို အနိုင်ရ ပါတီ ဘယ်လို ကြိုး ကိုင်မလဲ ပဲ စဉ်းစား ရ ပါမယ် မကိုင်တွက် တတ် ရင် တော့ စစ် သား အာဏာ သိမ်း တဲ့ ကိန်း ကြုံ တွေ့ ရ ပါ မယ် ပုံ ပါ အတိုင် ကင်းမြီးကောက် ဟာ လမင်း မျက်ရည်ကို စား သုံး နေ ပါတယ်
အကုန် ပြော ချင်တာ က ပါတီ နှစ် ခု အားပြိုင်မူ မှာ ပြည်သူ များ ဒုက္ခ မျက်ရည် များ ကျဆင်း နိုင်ပါ တယ် ဒါကို သတိ ထား သင့်ပါတယ် အနိုင် ရ ပါတီ ကိုင်တွယ်မူ ကောင်း မွန် ပါ က မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့ ရေး ဟာ အလွန် တရာ လှပ နေ မှာ ပါ
Tarot ပညာ နှင့် ရွှေးကောက်မဲ
ဗုဒ္ဒဟူး၊ အင်္ဂါ ကြံဖွတ်မှ နိုင်ငံဦးသျှောင်အာဏာရမည်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီး ၈လအတွင်း ကြီးမားလှသော သွေးထက်သံယို အရေးအခင်းပေါ်မည်။
၈ ဂဏန်းတားရော့ခ်မှာ အားသာအားနည်မှုမရှိဘူး ဒုက္ခနှစ်ခုလုံးကို အမျိုးသမီးကို ခြင်္သေ့ကော
မလွှတ်နိုင်ပဲခံစားနေကြရတယ်။ စိရခက် ကိုင်ရခက်အခြေအနေ…………..
အသိဥာဏ်ဘုန်းကံ နုသေးကြသော ပြည်သူားများ သတ်မှတ်ထားသောအရာတွေရှောင်ဖို့လမ်းမရှိ…
ကိုစွယ်တော်ရွက်သတိတရရှိတာ တွေ့ရလို့ ကိုယ်ထင်လာပြတာပါ။
မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာမြင်သမျှ ဖောက်ထွက်မြင်ခြင်းဟာ အရှေ့ကိုကြိုမြင်နိုင်ကြတယ်…
‘‘ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက အရှိန်အ၀ါသုံးပြီး မလျော်သြဇာနဲ့ ရှာထားတာကိုသာ သက်သေပြ၊ အဲဒီပြတဲ့လူကို ကျွန်တော် သူပြတဲ့ပမာဏာထက် ဆယ်ဆပြန်လျော်ပေးမယ်လို့ စိန်ခေါ်ရဲပါတယ်’’
Thu, 2015-10-29 18:58
No.901 Thursday, October 29, 2015
အမျိုးသားစာပေဆု ‘ကျမမာလါလါ’စာအုပ်နဲ့ ဘာသာပြန်(ရသ)ဆုရပါတယ်—၂၀၀၂ကတကြိမ်ရပါတယ်—အခုကဒုတိယအကြိမ်ပါ
နိုဝင်ဘာ -၁ရက်နေ့ 
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် နှင့် ပျဉ်းကတို့း ပြည်သူတွေအမေးအဖြေ
ပြည်သူရဲ့ အမေး ။ ။ အမေသားတုို့ NLD ကနုိုင်လုို့ရှိရင် ( ၂၀၀၇ ) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊(၈၈) က မတရားလုပ်ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ခွင့်ရမလားအမေ။
ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖြေ ။ ။ အဲ့ဒီဟာက (၂)ခုရှိတယ် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ကဘာလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရသိသင့်သိထိုက်တာကိုသိချင်တာကတစ်မျိုးကလဲ့စားချေ ဖို့ ဆိုရင်တော့ အမေလုံးဝအားမပေးဘူး။ ဒီနုိုင်ငံဟာအနာဂါတ်ကို ကြည့်ပြီးသွားရမှာအမြဲပဲအတိတ်ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆုိုရင် ခလုပ်တိုက်ပြီးချော်လဲပြီးကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် ခွဲသလို ဖြစ်လိမ့် မယ်။ ဒီတော့ အနာဂါတ်ကိုမေတ္တာစေတနာအခြေခံပြီးဆက်ပြီးသွားရမယ်။ သည်းခံမှု ရှိရမယ် ခွင့်လွှတ်မှုရှိရမယ်။ အမေတို့ (၁၉၈၈) ခုနှစ်ထဲ က ပါတီ စ တင်ထူထောင် ကတည်းကအမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး၊ အဂါတကင်းစင်ရေးဆိုပြီးတော့ ထူထောင်ခဲ့တာအဲ့ဒီ့လိုအာဃာတကင်းရှင်းစွာလုပ်ချင်ပါတယ်လုို့ ပြောတာကိုတချို့တွေကဘယ်လုိုပြောလဲဆိုတော့ အာဃာတကင်းစင် ရေးလို့ ပြောကတည်းကသူတို့ စိတ်ထဲမှာအဂါတရှိလုို့ လုို့ပြောကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သူတွေဟာသူတို့ စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးပြောနေတာနဲ့ တူတယ်လုို့ပဲကျမပြောချင်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာအတိတ်ရဲ့ကျွန်တွေ မဖြစ်ချင်ဘူးကျမတို့ဟာအနာဂါတ်ရဲ့ ဆရာတွေသာ ဖြစ်ချင်တယ်။ အနာဂါတ်ရဲ့ဖန်တီးရှင်တွေသာဖြစ်ချင်ပါတယ်။ အတိတ်ရဲ့ ကျွန်တွေ မဖြစ်ချင်ဘူးလို့ပဲကျမပြောပါရစေ။
– See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/article/item/8678-asm#sthash.eN9zGrSu.dpuf
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျေးဇူးတင်စကား သဝဏ်လွှာ။
ကိုယ် နဲ့ လားလား မှ မဆိုင်သော သတင်းမို့ အသာလှည့်ထွက်ပြီးမှ …
ဖြတ်ကနဲ တွေးမိ တာက ဒီ ရက် ထဲ အင်မတန် ကျော်ကြား နေသော မဲဆွယ်သူ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ကို ကြည့်ပြီး ဒီ Study ကို တို့များ သူကြီး ထောက်ခံ လိုက်ပုံရသလား။
၂၀၁၃ က ဒီ သတင်းကြီး ကို ဖော်ပြီး တောင် တစ်ကူးတစ်က တင်ပြ ရတယ် လို့။
မပြောတော့ဘူး။ မပြောတော့ဘူး။ lol:-))))
Today at 12:44am ·
AYA Bank urges it’s (5000) strong employees across the nation, to actively participate in casting their ballots in their respective constituencies, as it is their civic rights and duties ofacitizen to vote in the upcoming general elections on the 8th November. AYA Bank will support travel allowances for those who need to travel back to their respective constituencies to cast their votes and will grant On Duty leave as and when necessary.
တကယ်လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အပြည့်အဝပြန်နိုင်ခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလဲ။
ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက အပြည့်အဝတော့ မနိုင်နိုင်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနည်းဆုံးတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖို့ဆိုရင် လေးရာ့လေးဆယ်
ရှိတဲ့ လွှတ်တော်မှာ အနည်းဆုံး နှစ်ရာ့နှစ်ဆယ်တော့ ရှိဖို့လိုတယ်။ အဲဒီတော့ ခုနက တိုင်းလေးခုမှာ အားကောင်းတယ်၊ တိုင်းလေးခုပေါင်းရင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ရာသုံးဆယ့်ငါးနေရာရှိတယ်။
မန္တလေး တစ်ဝက်လောက် ထည့်တွက်လိုက်၊ ဧရာဝတီတို့၊ တနင်္သာရီတို့လည်း အားမကောင်းဦးတော့ တချို့တစ်ဝက်နိုင်မှာပဲ။ ဆိုတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ရနိုင်တဲ့ မဲနှစ်ရာကျော် လောက်ကတော့ ဒီချုပ်ကရနိုင်တယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မယ်။ ဒုတိယသမ္မတ တစ်နေရာတင်နိုင်မယ်။ ဒီအဆင့်လောက်တော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒီလောက်ကိုတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ တပ်က လက်ခံလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
အင်း.. ကြည့်ရင်းနဲ့.. ကြည့်ရင်းနဲ့.. အဲလိုဖြစ်လာမယ်လို့.. ထင်နေတယ်..။
လူပြောင်းပြီး ပြောမဲ့ စကား တွေကို ဆက်နားထောင်တတ်ဖို့ဘဲ လိုပါမယ်။
မဘသက… အဖွဲ့ချုပ်မဲတွေ တော်တော်များများ.. ဆွဲချသွားမယ်လို့…ထင်တယ်..။
ဝီဝီ တို့ ကို ပွဲထုတ်တာ မအောင်မြင်လိုက်တာမို့ ပြန်ဆုတ်သွားတာ လို့ ထင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ပွဲပြီးတော့ အခြေအနေ ကို ရိပ်မိသွားတာ ကိုး။
ဆက်လုပ်ရင် ပိုပြီး အနှုတ်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်လား။
အရေးထဲ ဘယ်သူက ကွန့်ပြီး ဇာ နဲ့ ဇွန် ကို ပွဲထုတ်တယ်မသိ။
တကဲ့ ကို ဉာဏ်ပညာမဲ့ဘဲ။
.နောက် ဖဲ တစ်ချပ် က ကျောင်းသား တွေ ပေါ့။
လူတွေ သိပ်မလှုပ် တော့ ဘာ ဆက် ပြီး အကြံထုတ် ဦးမယ်မသိ။
သူတို့ လော် တွေရဲ့ FB မျက်နှာတစ်ချို့ ပိတ်နေတာ တွေ့တယ်။
တကဲ့ ကို အရှက်ကင်း အဆင်အခြင်မဲ့ သူ တွေ ကိုယ့်တိုင်းပြည် မှာ ထိပ်တက် နေတာ ပိုပိုပြီး စိတ်ပျက်၊ ပိုပိုပြီး ရှက်မိနေတော့တယ်။